Akhriso: Fursado shaqo oo ka banaan Guddiga xuquuqda Aadanaha ee Midowga Afrika – Radio Muqdisho
Akhriso: Fursado shaqo oo ka banaan Guddiga xuquuqda Aadanaha ee Midowga Afrika
Xubinnimo Gudigga Xuquuqda Aadanaha ee Midowga Afrika
Wasaaradda Cadaaladda waxay ku wargelinaysaa dhamaan muwaanidiinta Soomaaliyeed ee khibrada u leh howlaha sharciga iyo arimaha xuquul insaanka in ay jiraan fursado ka banaan Ururka Midowga Afrika, gaar ahaan Guddiga Xuquuqul Insaanka, oo Soomaaliya ay xubin ka tahay.
Waxaa laga codsanayaa sharci-yaqaanada buuxin kara shuruudaha hoos ku xusan in ay soo gudbiyaan araajidooda codsiga, shuruudaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah:
1.	Aqoon la xiriirta sharciga/arrimaha xuquuqda aadanaha,
2.	Waayo-aragnimo shaqo iyo mid xirfadeed oo la xiriirta sharciga,
3.	Inuu yahay muwaadin Soomaaliyeed.
Waxaa ahmiyad gaar ah la siin doonaa codsiyada ka imaan doona dumarka. Waxaa laga codsanayaa qofka dalbanaya fursadan inuu soo gudbiyo codsiga inta aan la gaarin 27-da bisha Maarso, 2015.
Codsiyada araajida waxaa lagu soo hagaajin karaa Email – info@mojc.gov.so; Wasaaradda Cadaaladda, Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Madaxda Jaamacadda Jamhuuriya oo heshiisyo sare u qaadida tacliinta sare la galay Jaamacado caalami ah “SAWIRRO”
Kooxda UGUS oo laga saaray Jaziiradda Kudhaa